Nadwo Cilmiyeedkii 15aad oo Ka bilawday Magaaladda Boosaaso. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Nadwo Cilmiyeedkii 15aad oo Ka bilawday Magaaladda Boosaaso.
Nadwo Cilmiyeedkii 15aad oo Ka bilawday Magaaladda Boosaaso.
Waxaa Xalay ka bilowday Masjidka wayn ee Al-Rawda Nadwo Cilmiyeedkii 15-aad ee Sannadlaha ahayd oo ka dhici jirtay magaalada Boosaaso.
Nadwadan oo ciwaankeedu ahaaGundhigga Islaaxa Ummadda iyo Caqabadaha Hortaagan.
Kadib markii Aayadaha Quraanka lagu furfurtay, waxaa hadalka qaatay Boqor Burhaan Boqor Muuse oo bogaadiyay Nadwada iyo culumada soo qabanqaabisay, intaa kadib waxa uu boqorku ka hadlay waddanka xaaladda uu ku jiro iyo abaaraha ka jira, oo uu ku tilmaamay in ay abaartan tahay tii ugu darnayd oo abid nasoo marta, waxa uuna tilmaamay in dhibaatadaas looga bixi karo Cabsida Alle iyo ummaddu in ay Ilaaheed u noqoto.
Waxaa Intaa kadib kalimado soo dhawayn iyo ula jeeddooyinka loo qabto nadwooyinka sannadlaha ah ka hadlay labada sheikh ee kala ah Sh. Axmed Daahir iyo Sh.C/Raxmaan Bukhaari, waxayna labada sheekh u mahad celiyeen culumada ka qayb qaadanaysa Nadwada oo ka kala yimid dal iyo dibadba.
Intaa kadib waxaa si toos ah loo guda galay darsigii koowaad oo ku saabsanaa Sooyaalka Caqlaaniyiinta iyo dhibaatooyinka fikirkaas oo uu soo jeediyay Sh. Fu’aad Maxamuud X.Nuur.
Ugu horrayn waxa uu sheekhu qeexay waxa ay yihiin Caqlaaniyiintu, waxa uuna sheegay in lagu tilmaamo ”Koox isu taagtay in ay baddasho Sooyaalka ay ummadi leedahay ” , sidoo kale waxa uu sheegay in lagu tilmaamo “Koox aaminsan in diinta la oggolaysiiyo fikirada ku xooggan adduunka”.
Intaa kadib waxa uu ka warramay fikirkaan meesha uu ka soo jeedo iyo cidda bilowday, waxa uuna sheegay in uu kasoo jeedo firqada culumada islaamku ay u yaqaannaan MUCTAZILAH(المعتزلة) kooxdaas oo aaminsan In Caqliga laga hor mariyo wax walba oo diintu sheegtay, kooxdaas oo diidday in qabriga la isku cadaabayo, axaadiithta tilmaamaysa dheelmiska nabiga NNKH, Soo dagista Nabi Ciise NKH iyo waxyaabo badan oo diintu sugtay.
Gabagabadii waxaa soo gunaanaday darsigaas sh.axmed faarax Garaase oo tilmaamay sababaha keenay caqlaaniyadda iyo hababka looga hor tagi karo.
Previous articleWasiirka Maaliyadda oo qado sharaf u sameeyey shaqaalaha Wasaaradda
Next articleGudoomiyaha Cusub ee Gobolka Banaadir oo Xalay Si ramsi ah xilkii ula Wareegay